Ilogo yesiko lehowuliseyili 3×3 4×6 iphedi ecacileyo amanqaku ancamathelayo Umenzi kunye noMboneleli |Ukuhamba ngenqanawa
ilogo yesiko 3×3 4×6 iphedi ecacileyo amanqaku ancangathi
Sebenzisa izikhumbuzo kwiilaptops, iingcango zeencwadi, iifestile kunye neendonga.Amanqaku ancamathelayo akumgangatho ophezulu angaphinda asetyenziswe.Zonke iimilo kunye nemibala amanqaku ancangathi angenziwa ngokwezifiso kwaye akukho MOQ.
Izinto ezahlukeneyo: Amanqaku ancangathi angenziwa ngephepha le-Kraft, umqhaphu kunye nelinen yelinen, iphepha lomqhaphu, iphepha lenkuni, okanye ezinye izinto.
I-OEM: nokuba yeyiphi imibala kunye neemilo, sinokukwenzela wena.
AKUKHO MOQ:Nangona ubungakanani beodolo yakho iyi-100pads, iyasebenza kuthi.
Ukulungele ukuthunyelwa: Ezona sayizi ezihamba ngokukhawuleza ezibandakanya i-76mmx76mm, 76x126mm kunye ne-76x50mm zilungele isitokhwe sokuhanjiswa kweentsuku ze-2nd emva kwentlawulo.
Yintoni le nothi incangathi
I-Post-it Note (okanye inqaku elincangathi) liphepha elincinci elinomtya wokuncamathelisa kwakhona weglu ngasemva, elenzelwe ukuncamathisela okwethutyana amanqaku kumaxwebhu kunye neminye imiphezulu.I-adhesive low-tack-sensitive adhesive ivumela ukuba amanqaku afakwe ngokulula, asuswe kwaye aphinde afakwe kwenye indawo ngaphandle kokushiya intsalela.
Isicelo senqaku elincangathi
Unokusebenzisa amanqaku ancangathi ukushwankathela amabinzana, iziqendu, okanye izahluko zencwadi.Ukwenza njalo kuya kukuthintela ekubeni ubhale kumaphepha kwaye ube nenkxaso encangathi ikuvumela ukuba uncamathele isichasiselo naphi na apho ufuna khona.Ingcebiso elungileyo kukugcina inqaku elinye ngenqaku njengoko kuya kwenza uhlaziyo lube lula.
Ngaphambili: Umgangatho olungileyo ocacileyo we-3d amanqaku ancamathelayo eememo pads
Okulandelayo: isiko cute kawaii mini 3d incangathi inowuthi iipads memo
Kushushu kuthengiswa iA6 4×6 Isincamathelisi seThermal yePhepha...
Kushicilelwa ii-3 ply roll zekhompyuter iifom ze-dot matrix c...